Kidnapping : Karohina fatratra ireto olona ireto -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping : Karohina fatratra ireto olona ireto
09/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny efa nambara tamin’ny gazety Triatra omaly alarobia 07 jona 2017 dia karohina fatratra mihitsy ireto olona ireto, jiolahy mitam-piadiana mampidi-doza fantatra amin’ny anarana hoe Ranaivoson Augustin na Sôla na Tonton na koa Razoky, monina eny Loharanombato Itaosy. Efa voasambotry ny Brigade Criminelle tamin’ny resaka kidnapping ity olona ity kanefa nomen’ny Fitsarana fahafahana vonjy maika ny faha-30 desambra 2015. Vao nahare izany ny mpitandro ny filaminana dia nanohy avy hatrany ny fikarohana azy satria tena tandindomin-doza ny firenena. Mahavariana ihany moa ity fanomezana fahafahana vonjy maika ity indraindray, apetraka amin-dry zareo SMM moa ny fanontaniana.
Karohina fatratra manaraka azy Randriamanana Andry Nirina antsoina hoe Colbert, teraka tany Sambava ary mponina teny Itaosy ihany koa. Isan’ireo jiolahy gaigilahy mampidi-doza mitam-piadiana mpanao ireny fanafihana mitam-basy sy fakàna an-keriny ireny koa ny tenany. Toraka izany koa Randriambololona Princy mpitarika fikambanan-jiolahy mpanao fanafihana mitam-basy ary kidnapping ihany koa. Ilay olona azo tamin’ny “vidéosurveillance” indray koa dia mbola isan’ireo jiolahy mpanatanteraka ireny fakàna an-keriny sy fanafihana mitam-piadiana ireny. Somary maizina moa ny sary azo fa ho ezahina ny hanatsarana bebe kokoa izany mba ahafahan’ny olom-pirenena mamantatra tsara ny tavany.
Misokatra ho an’izay rehetra afaka manome fanampim-baovao mikasika ireto olona karohina fatratra ireto ny mpitandro filaminana ary manome toky ihany koa ny amin’ny fiarovana ny tsiambaratelo, amin’ny alalan’ny finday laharana 034.05.517.26. Averina eto indray fa mpanao fanafihana mitam-basy sy fakàna an-keriny ireo olona ireo ary loza mitatao ho an’ny isan-tokantrano, ny orinasa, ny tsirairay, teratany sy vahiny ka mila ny fifanomezan-tanan’ny olom-pirenena tomponandraikitra.
Ambohi-pihaonana. Hipoka tanteraka i Mahamasina tamin’ny faradoboky ny Podium omaly izay nahitana ireo mpanakanto sangany ary anisan’ny be mpankafy. Nilamina rahateo ny fampisehoana noho ireo fepetra samihafa ho fitandroana ny filaminana. Mpanakanto maromaro no nantsoin’ny ...Tohiny
Andry Rajoelina : Tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona teto Madagasikara